Tokony handeha any Afrika indray ve ny Alemanina?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Tokony handeha any Afrika indray ve ny Alemanina?
Ny minisitry ny fampandrosoana alemanina Gerd Müller (CSU) dia nangataka ny minisitry ny raharaham-bahiny Heiko Maas (SPD) mba hamerina hijery ny fameperana ny dia amin'ny firenena afrikanina noho ny areti-mandringana corona.
Minisitry ny fampandrosoana momba ny famerenana ny fameperana fitsangatsanganana ho an'ny Alemanina handehanana any Afrika. "Any Afrika fotsiny, olona 25 tapitrisa no miaina amin'ny fizahan-tany, ohatra any Maroc, Egypt, Tunisia, Namibia na Kenya," hoy i Müller tamin'ny "Redaction Network Germany". “Raha ambany ny tahan'ny otrikaretina any amin'ireo firenena ary manome toky ny fari-pahadiovana toy ny any Eropa, dia tsy misy antony tokony hanakanana azy ireo amin'ny fizahan-tany.”
Momba ny asa an-tapitrisany izy io, momba ny mahandro, mpanadio ary mpamily fiara fitateram-bahoaka, hoy ny minisitra. "Mila ny asa rehetra izy ireo mba ho tafavoaka velona", hoy ny mpanao politika CSU tamin'ny RND. Notsiahiviny fa tsy misy ny vola fanampiana amin'ny fotoana fohy na ny tetezana amin'ny tetezana any amin'ny firenena an-dalam-pandrosoana. “Sahirana ny olona ho tafavoaka velona isan'andro”, hoy ny fampitandreman'i Müller.
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina Hoy izy: “Miarahaba ny mpitsidika alemanina aty Afrika izahay. Vao omaly i Kenya no nampihatra ny tombo-kase Safe Travels an'ny WTTC. Ny birao fizahantany afrikanina dia hiara-miasa amin'ireo toerana afrikanina ary hanao izay fomba rehetra hahatonga ny mpizahatany alemanina hahatsapa ho voaro sy voaro.
IGLTA dia namerina nanamboatra ny fivoriambe Milan Global tamin'ny 2022
Sandals Foundation Manampy ireo mpiasan'ny fahasalamana hamerenana amin'ny laoniny
10 ora lasa izay